China HENGYITONG Smart Conveyor Roller Drive, tohano ny logistika marani-tsaina hamerenana haingana ny ozinina sy ny mpanamboatra | Harmonic
HENGYITONG Smart Conveyor Roller Drive, tohano haingana ny logistika marani-tsaina
Aorian'ny fihanaky ny fihanaky ny virus corona COVID-19 dia haorina indray ny rafitry ny rojom-pivarotana lojika manerantany, ny indostrian'ny lozisialy marani-tsaina tohanan'ny teknolojia avo lenta toa ny 5G, ny faharanitan-tsaina artifisialy ary ny angon-drakitra vaventy dia hitondra fampandrosoana lehibe. Antenaina fa ao anatin'ny dimy taona ho avy, hampiroborobo sy ampiharina amin'ny fonosana maitso sy ny fitahirizam-bokatra maitso. Ny endrika mandroso amin'ny logistika marani-tsaina dia ny fampiharana lalina sy ny fampidirana lalina ny faharanitan-tsaina sy ny fitaovana marani-tsaina. Ny haitao mandroso toy ny fifandraisana amin'ny vaovao, ny fizarana dizitaly ary ny fandraisana fanapahan-kevitra manan-tsaina no voalohany ampiasaina amin'ny fanovana sy fanavaozana ny indostrian'ny lozisialy. Amin'ny maha-ampahany manan-danja amin'ny logistika marani-tsaina, ny rafitra manavaka haingana dia ho lasa multiplier amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny asa lozisialy. Anisan'izany ny fanavaozana sy fanavaozana ny teknolojia Smart Conveyor Roller Drive izay nanjary laharam-pahamehana amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny fanasoketana.
Smart Conveyor Roller Drive dia mekanika fanalefahana mazava tsara sy motera servo tafiditra ao anaty amponga, 90% amin'ireo vokatra ampiasain'ny orinasam-pitaovana eto an-toerana dia miankina amin'ny marika eropeana, amerikana ary japoney, satria ny miniaturization an'ilay fitaovana dia mitaky teknolojia sy dingana avo kokoa. Eo amin'ny sehatry ny fikajiana sy ny fandefasana entana maivana, ny marika manana ny tahan'ny avo indrindra dia ny INTERROLL any Alemana, KYOWA any Japon. Ao amin'ny fakana andraikitra sy fandefasana adidy mavesatra, ny Seaparko amerikana no mpitarika ny tsena, ary ny indostrian'ny garazy fitehirizana am-pahefana sy refy telo-habe dia manana ny anjarany ihany koa.
Ny Smart Conveyor Roller Drive, izay nanahirana ireo orinasam-pitaovana noho ny ampihimamba ara-teknolojia, dia manana vidim-piainana lafo ary miadana ny valin'ny asa fanompoana. Mikendry ny olana maharitra amin'ny orinasam-pitaovana, hahafahana manapotika ny ampihimamba sy mampihena ny vidin'ny orinasam-pitaovana, Hengyitong dia nahomby tamin'ny famolavolana vokatra vita amin'ny servisy maotera kely sy salantsalany vita amin'ny servo vita amin'ny varotra taorian'ny fikarohana sy famotopotorana ara-barotra ary fikarohana ara-teknika. ary no voalohany manosika azy amin'ny tsena manerantany.
Ny famakafakana ny sehatry ny fampiharana amin'ny alàlan'ny fanasokajiana ny indostrian'ny lojika, ho an'ny Conveyor Roller Drive izay alentika ao anaty solika, dia mampiasa menaka fanitrika anaty ny menaka fanamorana mba hamandoana sy hanaparitahana ny hafanana. Ity famolavolana ity dia sarotra hisorohana ny olan'ny fandefasana sarimihetsika menaka manitra vokatry ny hafanana vokarin'ny amponga mandritra ny fitaterana haingam-pandeha satria tsy azo ihodivirana ny olana momba ny fanafanana amponga herinaratra mandritra ny fandidiana haingam-pandeha.
Ny fanamafisana ny diloilo fanosorana vokarin'ny fiasan'ny tora-pasika sy ny hafainganam-pandeha dia hitondra fiakarana tsindry maharitra hatrany amin'ny lavaka amponga mihidy. Rehefa mihazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha ny paingotra, ny tsindry ambony dia manamaivana ny tsindry anatiny fotsiny amin'ny alàlan'ny fanosehana ny diloilo manosotra avy amin'ny banga eo anelanelan'ny tampon'ny fifandraisana amin'ny lafiny roa amin'ny satroka farany. Noho ny antony ambonimbony kokoa, ny mpanjifa lozisialy fandefasana adidy mavesatra dia hita taratra amin'ny tranga misy ny famoahana solika avy amin'ny Conveyor Roller Drive izay alentika ao anaty solika.
Mba hamahana ny olan'ny mpampiasa, HENGYITONG dia mampiasa zava-baovao hanakanana ny fanatsarana endrika, misafidy ny hanampy rafitra fanalefahana valizy amin'ny fonosana fiara, aorian'ny famolavolana ny Smart Conveyor Roller, nafindra ny efitrano mba hiantohana fa ny roller dia mihazakazaka amin'ny fanjakana semi-vacuum, izay mamoaka ny toerana elastika mifanaraka amin'ny volatilization ny solika sy gazy, ary manafoana tanteraka ny olana amin'ny famoahana menaka manarona amin'ny tontolo iainana mavesatra. HENGYITONG no nitarika ny fampiasana ity haitao ity tamin'ny indostria ary nangataka patanty famoronana sy teknolojia ho an'ity firafitra famolavolana tokana ity.
Ny Smart Conveyor Roller Drive dia singa manan-danja izay miasa tsy tapaka ary mandeha amin'ny hafainganam-pandeha. Miaraka amin'ity haitao HENGYITONG misy patanty ity dia azo fehezina tsara ao anaty 45 ℃ ny mari-pana momba ny tontolo iainana. Tsy vitan'ny hoe mahafeno ny filan'ny rivotra tery izy io, fa tsy manana ny tsy fisian'ny solika sy ny fandoroana maina, fa manitatra ihany koa ny androm-piainan'ny vokatra ary mahatratra ny vokatra mahomby indrindra mandritra ny androm-piainana. Ny fikarohana haitao henjana sy ny tanjaky ny HENGYITONG ary ny fahaizany mandroso.
Tsara ny manamarika fa ny HENGYITONG dia manaraka akaiky ny firoboroboan'ny teknolojia famokarana marani-tsaina, mikendry ary manapaka tanteraka ny teknolojia maharitra sy ny ampihimamba vidin'ny marika sasany amin'ny Smart Conveyor Roller Drive, ny fitaovan'ny logistics manan-tsaina, manome vidiny bebe kokoa -Fifidianana mahomby amin'ny indostrian'ny famokarana manan-tsaina manerantany, indrindra ny indostrian'ny lozisialy, ny fanovana sy ny fanavaozana ny rafitra fitehirizana entana sy ny fanasokajiana
Fotoana fandefasana: Apr-17-2020